Yan Aung: အမှတ်တရ ဖေဖော်ဝါရီ....
ဒီလိုပဲ နှင်းတွေသည်းသည်းမည်းမည်းကျနေတဲ့ ဆောင်းညနေခင်းလေးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်သူမကို အမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်.
သူမဟာ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေမပါ၊ မာယာတွေနတ္ထိ၊ ဂုဏ်ပကာသနတွေမရှိဘဲနဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲကို ရိုးရှင်းစွာနဲ့ တိတ်တိတ်လေး ၀င်ရောက်ခဲ့တယ်.
တကယ်ဆို အဲဒီ့အချိန်က ကျွန်တော်တစ်ယောက် လောကကြီးရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးလို့ခေါ်ရမယ့် လောကဓံတရားတစ်ချို့နဲ့ အပြင်းအထန်စိန်ခေါ်နေခဲ့ချိန်ပေါ့.
ကျွန်တော်မှတ်မိနေခဲ့သေးတယ်. အဲဒီ့နေ့က ပေါ့.
နှလုံးသားထဲမှာ ကွဲရှရှဒဏ်ရာတစ်ချို့နဲ့အတူ မြို့ပြကြီးတစ်ခုကို ကျောခိုင်းခဲ့လို့ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က တက္ကသိုလ်လေးတစ်ခုရဲ့ အခန်းငယ်လေးထဲမှာ နှုတ်ဆိတ်ငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့ မထင်မရှား လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဆီကို သူမ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်..
ကျွန်တော်တို့မြို့လေးမှာ နှင်းမုန်တိုင်းတွေ ထူးကဲစွာ ကျရောက်ခဲ့တယ်.
နှစ်ပေအမြင့်လောက်ရှိတဲ့ နှင်းပုံကြီးတွေကြားထဲမှာ ကျောင်းသားတစ်ချို့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားနေခဲ့ချိန် ပြတင်းပေါက်လေးတစ်ခုကို လာမှန်နေတဲ့ နှင်းစက်တွေကို ကြည့်ရင်း အရောင်ခပ်နွမ်းနွမ်း ဟော်လိုဂစ်တာလေးတစ်လက်ကို အကြောင်းမဲ့ တီးခတ်နေခဲ့တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်.
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော်တို့အဆောင်မှာ ပါတီပွဲလုပ်ကြသေးတယ်. ဧည့်ခန်းထဲခဏထွက်လို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောလိုက်၊ သူတို့တွေကခုန်နေကြတာကို အားပေးလိုက်နဲ့ ကိုယ့်ဒဏ်ရာတွေကို အပြင်းစားတီးလုံးတစ်ချို့နဲ့ မေ့ဖျောက်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်.
ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲဖြေဖျောက်မရတဲ့အဆုံး ဘီယာတစ်ဗူးကိုဆွဲ၊ အာလူးကြော်ထုပ်တစ်ထုပ်ကိုယူလို့ ကိုယ့်အခန်းထဲပဲ ပြန်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်.
ကွန်ပြူတာကိုဖွင့်လို့ မြန်မာသီချင်းခပ်အေးအေးလေးတစ်ချို့ကို နားထောင်ရင်း အင်တာနက်မှာ လျှောက်ကြည့်နေခိုက်မှာပဲ ကျွန်တော့်အခန်းတံခါးဝမှာ အရိပ်တစ်ခု ကျရောက်လာခဲ့တယ်.
ဖျတ်ခနဲ ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်တော့ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ သူမမျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်စသတိထားမိလိုက်တယ်. မိတ်ကပ်မပါ၊ နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးထားဘဲ ရဲနေတဲ့ သူမနှုတ်ခမ်းလေးတွေ၊ ပါးလေးတွေကို ကျွန်တော်ဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ ကျွန်တော်ငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်.
'မမှတ်မိတော့ဘူးလား. ငါတို့တွေ မနှစ်ကတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်လေ...'
သူမက အဲလိုဆိုတော့ ကျွန်တော်သူမကို ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ဖူးမှန်း အပြေးအလွှားပြန်စဉ်းစားယူရတယ်.
'မင်း... မူးနေပြီထင်တယ်... ဟင်းဟင်းဟင်း...'
သူမရဲ့ ခနိုးခနဲ့ရယ်သံကြားတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ထောင်းခနဲ မခံချင်စိတ်ဖြစ်သွားမိတယ်.
'နိုးးး. ငါ့မှတ်ဥာဏ်တွေ မချို့ယွင်းသေးပါဘူး. မင်းကို ငါတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်. '
သူမက မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုဟန်ပါပါ ပင့်ချီရင်း ကျွန်တော်စကားဆက်မှာကို စောင့်နေခဲ့တယ်.
'မင်းကို ငါ မနှစ်က ခရစ်စမတ်ညမှာ တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်.'
'Geez!... ဒီလိုကျတော့လည်း မင်းက ကိုယ်ထင်ထားတာထက်တောင် မှတ်မိနေပါသေးလား...'
ပြီးတော့ အကြောင်းမဲ့သက်သက် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် မတိုင်ပင်ထားဘဲ ပြိုင်တူရယ်မောမိလိုက်ကြတယ်.
'ကိုယ် ၀င်လာခဲ့မယ်. ရမလား...'
'Sure! Come on in!'
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူမနဲ့ ကျွန်တော်ရင်းနှီးမှုရခဲ့ကြတယ်...
တိတိကျကျပြောရရင်တော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့ကပေါ့....
ကျွန်တော်နဲ့သူမကြားမှာ ထားရှိခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးလေးဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ အခိုင်မာဆုံးဖွဲ့နှောင်မိခဲ့ကြတယ်...
ကျွန်တော်အားလပ်မယ့်အချိန်တိုင်းကို သူမမျှော်နေမိတယ်လို့ ပြောတတ်သေးရဲ့...
ကျွန်တော်ကလည်း သူမလာမယ့် ညနေခင်းလေးတွေကို ၀ရန်တာပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့အတူ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ဖူးရဲ့...
နှစ်ဦးသားတွေ့ဆုံမိချိန်တွေမှာ ဟိုးအဝေးကြီးကနေ လှမ်းပြုံးပြနေတတ်တဲ့ သူမရဲ့ ပွင့်လင်းရိုးသားမှုတွေကို ကျွန်တော်မြတ်နိုးမိလိုက်တာ...
ကျွန်တော်နဲ့သူမကြားမှာ သန့်စင်တဲ့ တွယ်တာမှုတွေပဲ ထားရှိခဲ့ကြတာပါ...
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေတင်းနေပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်နဲ့သူမကြားမှာ အခိုင်မာဆုံး ထားရှိခဲ့တဲ့ စည်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်.
အဲဒါကတော့ ရည်ရွယ်ချက်တွေဘေးမရောက်စေရဘူး. ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို ပုံမှန်ဆက်လုပ်နေကြရမယ် ဆိုတာပါပဲ...
ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကို မသွေမဖည် အကောင်အထည်ဖော်နေခဲ့ချိန်တိုင်းမှာ သူမ ကျွန်တော့်ကို အမြဲအားပေးနေခဲ့တယ်.
ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မွန်းကြပ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမှာ သူမ ကျွန်တော့်နားမှာ အမြဲရှိနေခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်မတောက်တခေါက် ကဗျာတွေရွတ်ပြရင် သူမက ကျွန်တော့်ကို အထင်ကြီးမြတ်နိုးလေးစားခြင်းတွေနဲ့အတူ ငေးကြည့်နေတတ်ဖူးတယ်...
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ချက်တင်းတွေထိုင်တာ များနေရင် သူမ ကျွန်တော့်ကို ငြူစူရင်း မကျေနပ်စိတ်လေးတွေ ပြတတ်ဖူးတယ်...
ဒီလိုဆောင်းညနေခင်းတွေရောက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကို မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယောက်ပမာ ဖေးမကူညီ ထိန်းသိမ်း ပေးတတ်ဖူးတဲ့ သူမကိုလွမ်းနေတတ်တယ်.....
လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုင်ဖို့အတွက်တောင် မစဉ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ခပ်မွဲမွဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုမှ သံယောဇဉ်ထားရင်း ဖေးမကူညီခဲ့တဲ့ သူမကို ကျွန်တော်အမြဲတမ်း မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေခဲ့တာ မလွန်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်.
သူမက ကျွန်တော့်ကို ဂရုတစိုက်ရှိခဲ့သလောက်ကျွန်တော်က သူမကို အလေးအနက်သိပ်မရှိခဲ့ဘူး..
ကျွန်တော့်စိတ်တွေဖိစီးမှုများလာရင် ကျွန်တော်သူမကို စကားကောင်းကောင်း ပြန်ပြောလေ့မရှိတော့ဘူး...
အဲလိုအချိန်တွေမှာ သူမတစ်ယောက် အခန်းထောင့်လေးမှာ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို တိတ်တဆိတ်ဖတ်နေရင်း ကျွန်တော် သူမကို စကားစပြောလာမယ့်အချိန်ကို တိတ်တခိုးမျှော်လင့်နေမိတတ်တယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောပြတယ်.
သူများတကာတွေ သူတို့ချစ်သူတွေအတွက် မွေးနေ့ပွဲတွေ၊ အထိမ်းအမှတ်တွေ၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းတွေကို ခမ်းခမ်းနားနားလုပ်နေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်သူမရဲ့ မွေးနေ့ကိုတောင် အမှတ်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး...
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်ဗြုန်းခနဲ သတိရလို့ ပြန်တောင်းပန်မိချိန်မှာ သူမက ခပ်နွမ်းနွမ်းအပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့အတူ ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့်လေး ပြန်ပြောတတ်တယ်.
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ငိုင်တွေကျသွားရင် ကျွန်တော့်ပုခုံးပေါ် သူမမေးစေ့လေး လာတင်လို့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သူမဖက် အတင်းဆွဲလှည့်ရင်း ကျွန်တော်ပျော်အောင် ပြန်စတတ်သေးတယ်...
ကျွန်တော့်အပေါ် ဒီလောက်ကောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ သူမကိုကျွန်တော် မသိတတ်ခဲ့မိတာ တွေအတွက် ကျွန်တော် နောင်တရမိပါတယ်...
'မင်း... ကိုယ့်ကို တခမ်းတနား အသိအမှတ်ပြုနေစရာ မလိုပါဘူးကွာ...အရေးကြီးတာက မင်းနားမှာ ကိုယ်ရှိနေဖို့နဲ့ ကိုယ့်နားမှာ မင်းရှိနေဖို့... ပြီးတော့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မခွဲမခွာဘဲ အမြဲတမ်း ဖေးမကူညီနေဖို့... ဒါပဲ လိုပါတယ်... I don't expect anything from you. I just wanna be with you. That only matters...'
ကိုယ် မင်းရဲ့ ခွင့်လွှတ်သည်းခံခြင်းတွေကို မက်မောလိုက်တာ....
ဒီလိုဆောင်းညနေခင်းတွေရောက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ပမာ မငြူမစူဘဲ အမြဲတမ်းနားလည် စာနာပေးတတ်တဲ့ သူမကို သတိရနေတတ်တယ်...
လူတွေကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားရင်း လူတွေက နားလည်မှုလွဲတာကို ခံရဖူးတဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်တွေ ညှိူးချုန်းလို့ ၀မ်းနည်းအားငယ်နေခဲ့ချိန်မှာ သူမက ကျွန်တော့်ကို ခါတိုင်းအချိန်တွေထက် ပိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်...
'မင်းသိလား... လူတွေကို နားလည်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်...'
'လီယိုတော်စတွိုင်းလ်က ပြောဖူးတယ်. လူတွေက ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်ရမယ်လို့ပဲ ပြောနေကြတယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကို စတင်ပြောင်းလဲဖို့တော့ ဘယ်သူမှ သတိမရကြဘူးတဲ့... သူတို့ပြောင်းလဲတာ မပြောင်းလဲတာကို မင်း ဘာလို့စိတ်ထဲထားနေမလဲ. ယောနိသော မနသိကာရထားပြီး မင်းကိုယ်တိုင်ပဲ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်စမ်းပါ. အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်. ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေပဲ ဆက်လုပ်စမ်းပါကွာ...'
တစ်ခါတစ်ရံ ချော့ပြောလိုက်၊တစ်ခါတစ်ရံ ကရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ်တွေ ပြန်လည်တည်ငြိမ် အားပြည့်လာအောင် သူမ အချိန်ပေးကူညီခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်သူမမျက်နှာပေါ် ဖေးအပ်လို့ အမှတ်တရ အနမ်းတစ်ချို့ ချွေခဲ့ဖူးတယ်....
ကျွန်တော်သူမရင်ခွင်ထဲမှေးအိပ်လို့ ဘ၀အမောတွေက ပေါက်ဖွားပေးလိုက်တဲ့ ရှတတကဗျာတစ်ချို့ ရွတ်ဆိုခဲ့ဖူးတယ်...
ကျွန်တော်သူမဆံနွယ်တွေထဲ ခေါင်းဝှက်လို့ အဆင်မပြေမှုတွေအတွက်အသံတိတ်ငိုရှိုက်ခဲ့ဖူးတယ်.
နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေ မြို့ပြကြီးပေါ်တက်လို့ နောက်နှစ်အတွက် ကျောင်းစရိတ်သွားရှာဖို့ ကျွန်တော် ထွက်ခွာသွားလေ့ရှိတိုင်း သူမ ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲလို့ တဖွဖွမှာလေ့ရှိတယ်...
'လူတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်ပေါင်း... စိတ်ကိုလျှော့... ဒေါသမကြီးနဲ့... ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို မျက်ခြည်အပြတ်မခံနဲ့.. ပိုက်ဆံစု... အသုံးနဲ့ အဖြုန်းကို ခွဲခြားသိ... သွားတာလာတာတွေ သတိထား... '
ချီကာဂိုကနေထွက်ခွာလာတဲ့ Amtrak ရထားကြီးပေါ် ကျွန်တော်တက်လိုက်ချိန်မှာ အားငယ်တဲ့ မျက်ဝန်းလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူမငေးကြည့်နေတတ်တယ်.
'ကိုယ် မင်းကို သတိရနေမှာပါ... ဖုန်းမလုပ်ချင်နေ. အင်တာနက်လေးတော့ ရအောင်လုပ်ထားနော်... အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ကြမယ်လေ...'
အမှောင်ထုထဲကို ရထားကြီးတိုးဝင်သွားချိန်မှာ သူမတစ်ယောက် ဘူတာရုံမှာ ဘယ်လိုကျန်ရစ်ခဲ့မလဲ...
ကျွန်တော့်အခန်းငယ်လေးဆီကို ပြန်သွားပြီး ကျွန်တော့်အိပ်ယာပေါ်ပစ်လှဲလို့ ၀မ်းနည်းအားငယ်နေမလား...
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တီးခတ်လေ့ရှိတဲ့ မဟော်ဂနီရောင် ဂစ်တာအိုလေးကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတခြင်းတွေနဲ့အတူ ဖက်တွယ်ထားလေမလား...
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်အမြဲဆွဲလေ့ရှိတဲ့ ပုံဆွဲစာအုပ်လေးကို ဖွင့်ကြည့်ရင်း သူမအတွက် အမှတ်တရဆွဲပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံလေးတွေကို အလွမ်းပြေကြည့်နေလေမလား....
မြုိ့ပြကြီးကိုရောက်လို့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်အတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို အမောတကော ရှာနေခဲ့ချိန်တွေမှာ သူမတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို အွန်လိုင်းမှာ မျှော်နေခဲ့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေခဲ့တယ်....
ရောက်တဲ့နေရာမှာ တွေ့တဲ့သူတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းရင်း ကိုယ့်ဘ၀ကို ထိန်းကျောင်းနေခဲ့ချိန်တွေတိုင်းမှာ သူမရဲ့ ရင်ခွင်ကို ကျွန်တော်တမ်းတမိတယ်...
အင်တာနက်အဆင်ပြေလို့ ကျွန်တော်အွန်လိုင်းဝင်လိုက်ချိန်မှာ သူမနဲ့တွေ့တော့ ကျွန်တော် ၀မ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်မိတယ်.
ချက်ချင်း စကားပြန်မပြောတဲ့သူမကို ကျွန်တော် စိတ်ဆိုးပြီး မေးတော့ သူမက ပြန်ပြောရှာတယ်...
'ကိုယ် မင်းကို စောင့်နေခဲ့တာ မင်း ထွက်သွားကတည်းကပဲ... အခု ပြန်တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာလုံးဆို့ပြီး ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တာ ပါ... ကိုယ်မင်းကို အရမ်းသတိရတယ်...'
ကျွန်တော့်ရင်ထဲ နင့်ခနဲ ဖြစ်သွားတာပဲ....
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အွန်လိုင်းမှာတွေ့ကြတယ်... အတွေ့အကြုံတွေ ဝေမျှကြတယ်.... ကျွန်တော့်ကဗျာသစ်တွေ၊ စာတိုပေစတွေကို သူမနားထောင်တယ်. သူမ က ကျွန်တော့်ကို နားထောင်စေချင်တဲ့ သီချင်းတွေ၊ ဖတ်စေချင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ကျွန်တော်နားထောင်တယ်. ဖတ်တယ်.
ဒီလိုဆောင်းညနေခင်းတွေရောက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကို အမြဲလွမ်းနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သူမရဲ့ စကားသံချိုချိုလေးတွေကို ကျွန်တော်တမ်းတမိတယ်...
အခုတော့ ကျွန်တော် မြို့ပြကြီးတစ်ခုမှာ အခြေချ နေထိုင်နေခဲ့ပြီ...
သူမနဲ့ ကျွန်တော်အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိနေခဲ့တုန်းပါပဲ...
ဒါပေမယ့် အရင်လိုတော့ စကားတွေ အကြာကြီး မပြောနိုင်ကြတော့ဘူး... အဓိကကတော့ ကျွန်တော့်ဖက်က မအားလပ်တာတွေကြောင့်ပါ...
တစ်ခါတစ်လေ အားလပ်ပြန်တော့လည်း ကျွန်တော် အရမ်းပင်ပန်းနေတတ်လို့ သူမကို စကားကောင်းကောင်း ပြန်မပြောမိတတ်ပြန်ဘူး...
ဒီနှစ်လည်း သူမမွေးနေ့ကို ကျွန်တော်သတိမရလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး....
နောက်ကျမှ ရောက်လာတာက လုံးဝရောက်မလာတာထက်စာရင် ကောင်းပါသေးတယ်တဲ့လေ....
သူမအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းဖို့ ကျွန်တော်နောက်ကျခဲ့တယ်...
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သူမအတွက် မှတ်မှတ်ရရ ဒီပို့စ်လေးရေးဖြစ်တယ်....
ဒါကို သူမသိရင် ကျေနပ်မှာပါ....
သူမ တစ်ခါက ပြောခဲ့ဖူးတယ်...
'မင်းနဲ့ကိုယ်ကြားမှာ ဟန်ဆောင်မှုတွေ၊ လူကြီးလူကောင်းဆန်ပြမှုတွေ၊ အလိုက်သိတတ်မှုတွေ မလိုအပ်ဘူး... မင်းလည်း နေတတ်သလိုနေ၊ ကိုယ်လည်း နေတတ်သလိုနေမယ်. တစ်ခုပဲ ကိုယ့်အတွက်လုပ်ပေးပါ.... '
'ဘာများလဲ' လို့ ကျွန်တော်ကမေးတော့...
'ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် မင်းကိုယ့်ကို သတိရနေပေးပါ... ဒါဆို ကိုယ်ကျေနပ်တယ်...'
ကျွန်တော် သူမကို သတိရတာပေါ့...
သူမကို ဘယ်သူတွေကများ ထိကပါးရိကပါးလုပ်နေကြပြီလဲပေါ့...
ကိုယ်မရှိဘဲ သူမတစ်ယောက်တည်း ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့....
မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်တာနဲ့လည်း သတိရတယ်...
မနေ့ညက သူမ ကောင်းကောင်းမှ အနားယူရရဲ့လားပေါ့...
တစ်ခုပဲ ကျွန်တော့်မှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိတယ်...
ကျွန်တော်သူမကို မြတ်နိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို လူသိရှင်ကြားတစ်ခါမှ ထုတ်ဖော်မပြောပြခဲ့ဖူးတာ၊ သူမကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ဖူးတာပါ...
ဒီနေ့တော့ သူမရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံဘဲ ဒီပို့စ်လေး တိတ်တခိုးရေးဖြစ်ခဲ့တယ်...
သူမနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၅) ရက်ကတော့ လွန်ခဲ့ပါပြီ...
ဒါပေမယ့် ဖေဖော်ဝါရီဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုကတော့ ရင်ထဲမှာ ခပ်နွေးနွေးလေး ကျန်ရစ်နေခဲ့ဆဲပဲ...
ဒီလထဲမှာ ပဲ သူမရဲ့ မွေးနေ့ရှိခဲ့တယ်....
ဒီ့အတွက် ကျွန်တော်ရယ်လေ သူမအတွက် ဒီည တစ်စုံတစ်ခု ဆုတောင်းပေးချင်တယ်...
ခင်ဗျားတို့ သူမကို တွေ့ဖြစ်ရင်လည်း ကျွန်တော်က ဒီစကားလေး လက်ဆောင်ပါးလိုက်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါနော်...
'ကိုယ်မင်းကို သိပ်လွမ်းတယ်... အရင်လို ခဏခဏ မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ မင်းရှိနေဆဲပါပဲ.... မင်းနဲ့ကိုယ် ရှေ့လျှောက်အတူတူလက်တွဲပြီး ဘ၀ခရီးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်တွဲခရီးဆက်ကြမယ်နော်...
ဒီလောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်အသက်ရှင်နေသေးသရွေ့ မင်းအတွက် အမှတ်တရလေးတွေ ဆက်လက်ဖန်တီးပေးနေဦးမှာပါ...
အထူးသဖြင့် ဒီလိုဆောင်းညနေခင်းလေးတွေ ရောက်တိုင်း မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ စတင်ဆုံစည်းခဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလေးကို အမှတ်တရရှိနေမိမှာပါ...
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ www.yanaung.net ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးရေ......
ကျွန်တော် ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်ညမှာ စရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. အင်္ဂလိပ်လိုပဲ စရေးခဲ့တာပါ. ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့မှာမှ စပြီး မြန်မာလို စရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်. ဒါကြောင့် မြန်မာလိုစရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ရက်ကိုပဲ ယူပြီး ဖေဖော်ဝါရီအမှတ်တရလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်... ဇာတ်ရည်လည်ပြီနော်... ဟတ်ဟတ်...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ.. ဘလောဂ်လေးရေ..
တို့လို့တန်းလန်းကျန်သော ပိုစ်များကို အမြန်ဖြတ်ပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဘလောဂ်ဘယ်တုန်းက စရေးလည်း မမှတ်မိပုံကတော့ မလေးထက် ဆိုးနေပါပေါ့လား..
အခုလည်း ရက်စွဲက မတ်လထဲရောက်နေပြီ။
ဒါနဲ့.. ယူအက်စ်နဲ့ကနေဒါ hockey မှာ အမျိုးသားပွဲတင်မက အမျိုးသမီးပွဲမှာပါ ကနေဒါက ယူအက်စ်ကို အနိုင်ရဗိုလ်စွဲသွားကြောင်းး :P
စာတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် မရေးပေမယ့် ရေးလိုက်ရင် အတွေး ဒါမှမဟုတ် ဟာာသ ရသတခုခု အမြဲပေးတတ်တဲ့ ရန်အောင်ရဲ့ ဘလောာဂ့်ကို နှစ်သက်မိပါတယ်။
စာပေကောင်းတခုရဖို့ Quantity မလိုပဲ Quality သာလိုလို့ နောက်ရေးမယ့် စာတိုင်းကို အမြဲ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
ဘလောဂ့်ဂါ ရန်အောင်ရော စာဖတ်သူကို စိတ်ကြည်စေတဲ့ www.yanaung.net ရော ဒီဘလောဂ့်ကို စာလာဖတ်သူတွေရော ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ အရေးအသားလေးပါပဲ အစ်ကိုရေ.... ဇာတ်လမ်းလေးထဲမြောပါသွားတယ်... လူငယ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ အစ်ကို့အတွေးလေး အရမ်းလန်းတယ်ဗျာ.. :)
စာပြန်ရေးချင်စိတ်တောင် ပေါက်သွားတယ် ။
Happy Belated Birthday ပါရှင်..။
ပြီးမှဘဲ ဘလောဂ့်လေးနဲ့ မွေးနေ့အကြောင်းမှန်း သိလိုက်ရတယ်
ဘာအကြောင်းနဲ့ဘဲ ဘလောဂ့်လေးကို မွေးဖွားလာလာ
ဒီဘလောဂ့်ဟာ ကိုယ်တွေဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ပါလား
ဂုဏ်ယူပါတယ်.. ရှေ့ဆက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ဘလောဂ့်လေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေ...
Ohh..true story လေးများလားလို့ ဖတ်ရင်း ခံစားမိနေတာ အတော်ဆိုးတဲ့ မောင်ရန်အောင်ပဲ။
စာဖတ်သူကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဖြစ်အောင် ရေးလည်းရေး တတ်တယ်။
ဩော်... ဩော်... အာစကော်ရယ်....